Puntland oo sheegtay inay qabatay rag qaraxyo diyaarinayay - Awdinle Online
Taliska Ciidanka Xoogga Puntland ee loo soo gaabiyo PSF ayaa shaaciyay in ay hawlgal qorshaysan ku qabteen shakhsiyaad diyaariya Qaraxyada lagu aaso Buuraleyda Gobolka Bari kuwaas oo lala beegsado Ciidamada Difaaca Puntland.
Qoraal ka soo baxay taliska Ciidamada PSF waxa lagu sheegay in Hawlgalkaas uu saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso balse lama shaacin dadka la qabtay inay ka tirsan yihiin Daacish ama Al-Shabaab.
Howlgalka oo weli ka socda Xaafado ka tirsan Boosaaso ayaa goobjoogayaal waxaa ay sheegeen in Ciidamada mararka ay ay galayeen Guryo bartilmaameed u ahaa.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka bari iyo degaano hoostaga ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro qaraxyo ah oo lagu dilay Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland iyo Ciidamo.
Previous articleLaftagareen oo qiray dhibka heysta Shacabka degmada Xuddur
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo gaaray degmada Xuddur